Man United oo la ballansan Kooxaha Inter Milan, AC Milan iyo Tottenham kulammada Saaxiibtinnimo ee isu-diyaarinta xilli ciyaareedka cusub – Gool FM
(Manchester) 10 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa bilaabaysa u diyaar-garowga xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League 2019/20.
Kooxda heerka aadka u hooseeya ku soo bandhigtay horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkii dhammaaday ee Man Utd ayaa socdaal kala duwan bixin doonta iyadoo meelo ka baxsan England ku soo ciyaari doonta kulamo saaxiibtinnimo sida Australia, Shiinaha, Singapore iyo Norway.
Kooxda Manchester United ayaa durbaba ku sugan Australia halkaasoo ay Sabtida kulankoodii ugu horreeyay ee saaxiibtinimo ay ku ciyaari doonto, waxaana ay kula dheeli doontaa Perth Glory.
Sidoo kale kooxda Macallin Ole ayaa ballansatay kooxaha reer Talyaani ee Inter Milan iyo AC Milan, waxaana sidoo kale kulamadeeda saaxiibtinnimo ee isu-diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ku jirta kooxda Tottenham.
Kulanka AC Milan ayaa noqon doona kan ugu dambeeya ee ciyaaraheeda saaxiibtinnimo ay Manchester United ku soo gabagabayn doonto waxaana kulankaas uu ka dhici doonaa Magaalada Cardiff 3 bisha Agoosto ee soo aaddan.
Haddaba halkaan hoose ka eeg kulamada saaxiibtinnimo ee ay kooxda Manchester United ciyaari doonto kuwaasoo ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub 2019-20 iyo taariikhda la ciyaari doono:-
July 13: Perth Glory – Optus Stadium, Perth
July 17: Leeds Utd – Optus Stadium, Perth
July 20: Inter Milan – National Stadium, Singapore
July 25: Tottenham – Hongkou Stadium, Shanghai, China
July 30: Kristiansund – Ullevaal Stadium, Oslo, Norway
August 3: AC Milan – Principality Stadium, Cardiff
Senegal oo noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya afar dhammaadka Koobka qarammada Afrika 2019... + SAWIRRO